Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Jadeecada Cagaaran | Shaxda Warshad Qaadista Heerka Sare ee Shiinaha
Miiska goynta maqaska ee go'an waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa howlaha bakhaarka, khadadka isku imaatinka iyo codsiyada kale ee warshadaha. Cabbirka barxadda, awoodda xamuulka, dhererka barxadda, iwm waa la waadin karaa. Qalabka ikhtiyaariga ah sida qalabka kontoroolka fog ayaa la bixin karaa.
Waxaan ku darnay barxad duubis heer sare oo maqas ah oo go'an si looga dhigo mid ku habboon shaqada qadka shirarka iyo warshadaha kale ee la xiriira. Dabcan, marka lagu daro tan, waxaan aqbalnaa miisaska iyo cabbirka loo habeeyay.
Afarta miis wiish ee maqaska waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu qaado alaabada dabaqa koowaad ilaa dabaqa labaad. Sababta Macaamiisha qaarkood waxay leeyihiin meel kooban mana jiraan meel ku filan oo lagu rakibo wiishka xamuulka ama wiishka xamuulka. Waxaad dooran kartaa afarta miis wiishka ee wiishka halkii aad ka rari lahayd wiishka xamuulka.
Dhererka shaqada ee saddexda miis wiishka miisaanka ayaa ka sarreeya kan miiska wiishka maqaska labalaabka ah. Waxay gaari kartaa dhererkeedu yahay 3000mm oo culeyska ugu badan uu gaari karo 2000kg, taas oo shaki la'aan ka dhigaysa shaqooyinka maareynta maaddooyinka qaarkood kuwo wax ku ool ah oo ku habboon.
Miiska labiska maqaska laba jibbaaran ayaa ku habboon shaqada meelaha dhaadheer ee aan lagu gaari karin hal miis wiish, oo waxaa lagu rakibi karaa god, si miiska miisaska miisku loola simo dhulka oo uusan u noqon caqabad ku timaadda dhulka dhererkiisa awgeed.